Dowladda Mareykanka oo raadinaysa nin Mareykan ah oo lagu tuhmayo Soomaaliya - Caasimada Online
Home Warar Dowladda Mareykanka oo raadinaysa nin Mareykan ah oo lagu tuhmayo Soomaaliya
Dowladda Mareykanka oo raadinaysa nin Mareykan ah oo lagu tuhmayo Soomaaliya
Washington (Caasimada Online) – Dowladda Mareykanka ayaa ayaa shaacisay in lacag dhan $5 milyan oo dollarka Mareykanka ah ay siin doonto ciddii keenta xog ku saabsan halka uu ku sugan yahay Jihaad Serwaan Mustafa, oo ah muwaadin Mareykan ah.
Mustafa oo loo yaqaan Axmed Gurey ayaa la rumeysan yahay inuu xubin sare ka yahay kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya, kuna sugan yahay Soomaaliya.
“Mustafa waxaa la rumeysan yahay inuu yahay muwaadinka ugu darajada sareeya ee u dhashay Mareykanka ee dibada uga soo dagaalama urur argagixiso,” ayuu yiri Xeer Ilaaliyaha Mareykanka Robert Brewer. “Maamulka argagixisada Al-Shabaab waxay khatar ku tahay amniga qaranka Mareykanka, xulafadayada caalamiga ah iyo dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan.”
Waxaa uu Mustafa ka mid yahay dadka loogu baadi-goobis badan yahay islamarkana ku jira liiska FBI.
Waa kumaa Serwan Mostafa
Mustafa wuxuu ku dhashay Wisconsin wuxuuna ku koray San Diego, sida ay shegeen sarakiisha Mareykanka.
Waxa uu ku soo barbaaray xaafadda Serra Mesa, waxa uuna ka qalin jabiyay dugsiga sare ee magaaladaas. Markii uu dugsiga sare dhameeyay waxaa uu ku biiray Jaamacadda California, San Diego,halkaasi oo uu ka qalin-jabiyay sanaddii 2004.
Sanaddii 2005 isaga oo ay da’diisu tahay 23 jir ayuu Mustafa sida la sheegay ku biiray kooxda Al-shabab. Waxa uu culuumta diinta islamka ka bartay xarunta Islaamiga ah ee San Diego ee Kearny Mesa,.
Aabihii, oo lagu magacaabo Xaliim Mustafa Gabori islamarkaana asal ahaan ka soo jeeda Kurdiyiin reer Suuriya kuna noolaa San Diego ayaa geeriyooday 2018 sida mid ka mid saaxibadiisa u sheegay warbaahinta Fox News .
Hooyadii, Sumeeya, waa macalimad iskuul oo ka soo shaqeysay gobolo iyo dalal kala duwan, sida ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka.
Mustafa ayaa wajahaya dacwado kala duwan oo ay ka mid tahay shirqool lagu taageerayo argagixisada, ajnabiga ah iyo in taageero agab ah uu siiyo urur argagixiso shisheeye.
Haddii lagu helo dambiga lagu soo oogay, wuxuu wajihi doonaa ilaa 55 sano oo xarig ah iyo $750,000 oo ganaax ah, sida ay sheegeen dacwad oogayaasha.
Eedaha loo haysto
Mid ka mid ah eedaha loo haysto waxaa ka mid ah weerar alshabaab ay bishii September 2019-kii ku qaadeen garoonka Balidoogle ee Soomaaliya, halkaas oo uu Maraykanka ku tabobaro ciidamada Soomaaliya.
Waxaa la sheegay in uu Alshabaab ku biiray sanadkii 2006-dii.
Sida lagu sheegay war saxaafadeed shalay kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibedda Maraykanka, Mustafa waxa uu Alshabaab u qaabilsanyahay dhanka tabobarista ciidamadooda, isaga oo sidoo kale ah ninka u dhaxeeya Alshabaab iyo ururada kale ee argagixisada ah. Waxaase ugu weyn ee ay wasaaradda sheegay in uu hormuud ka yahay barnaamijka qaraxyada ee Alshabaab.